NIn Soomaali ah oo Wasiir ka noqdey Wasaarad uu Waardiye ka ahaa
HARGRYSA - Marka la eego hannaanka siyaasadda ee Soomaalida, way adag tahay in dadka shaqooyinka hoose haya sida waardiyeyaasha oo kale ay maqaam sare ka gaaraan siyaasadda, balse ma adko in qofka uu ka meelgaaro hammigiisa.
Taariikh noolaleedka iyo qaabka uu ku gaaray maqaamka siyaasadeed ee maanta uu joogo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland, Suleymaan Yuusuf Koore ayaa ka duwan sida ay dad badan u haystaan.
Suleymaan waxaa uu sanadkii 1984 waardiye ka ahaa xarunta raadiyo Hargeysa oo hadda ay ku taallo wasaaradda warfaafinta ee Soomaliland.
Wasiir Suleymaan oo sanadkii 1984 ay da'diisu ahayd 18 sano jir ayaa markii uu ka qallin jabiyay dugsiga sare ayaa waxaa uu ka qeybgalay barnaamijkii la oran jiray shaqo qaran, kaas oo ardayda la gellin jiray mudo laba sano ah kahor inta aysan shaqo billaabin.
"Shaqadii qaranka ayaa la igu soo qoray idaacadda qaranka anigoo arday dugsi sare ka baxay, muddo lix ilaa toddobo bilood ah ayaa habeenkii waxaan waardiye ka qaban jiray idaacadda aan hadda wasiirka u ahay," ayuu yiri wasiir Suleymaan oo BBC-da la hadlay.
Xaaladda noolaleed ee xilligaas uu ku sugnaa ayuu sheegay in ay aad u adkeyd, gaar ahaan dhanka cuntada, waxaana uu sheegay in aroortii la siin jiray hal rooti oo uu ku quraacdo, balse uu ku qanacsanaa maadaama xaaladda dalka ay sidaas iska ahayd xilligaas.
Waxaa kale oo uu sheegay in hadba meel loo bedalli jiray oo saddex bilood kadib uu dib ugu soo laaban jiray xarunta idaacadda, halkaas o uu sheegay in habeenkii ay dhaxantu aad u darneyd.
"Habeenkiina waaxaan ahaa waardiye, aroortiina waxaan qaban jiray shaqooyin kale haddii ay ahaan lahayd in aan macallin noqdo ama shaqooyinka kale ee la ii diro", ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Wasiir Suleymaan ayaa sidoo kale BBC-da u sheegay in qoyskiisa ay degenaayeen miyiga, markii uu shaqada qabtana bishii lacag dhan 120 shilin Soomaali ah mushaar ahaan loo siin jiray, lacagtaas oo uu sheegay in ay aad u yareyd oo ay u goyn jirtay oo keliya dhar dhaqaalka, kirada iyo waxyaabo lamid ah.
Baryada ayuu sheegay in xilligaas ay ahayd mid ceeb ah, isaguna uu ahaa nin dhallinyaro ah oo uu xaalad adag wax kusoo bartay.
Mashruuca shaqo qaran ayuu sheegay inuu ahaa mid qof walba oo soo dhameeyo dugsiga sare uu qaban jiray, waxaana uu yiri: "xafiiska aan hadda ka shaqeeyo waagaasi ma aanan geli jirin oo la iima oggoleyn, maadaam aan ahaa waardiye".
Shaqadaas ayuu sheegay in xusuus gaar ah ay u leedahay, balse dhawaan markii uu meel fagaare ah ka sheegay ay dad badan ku dhaliileen sababta uu u sheegay, iyagoona sida uu sheegay u arkayay arrin ceeb ah.
Suleymaan wuxuu sheegay in shaqo badan uu Somaliland kasoo qabtay tan iyo sanadkii 1991, xilal badan oo wasaaradda biyaha ay u dambeysay uu soo maray oo wasiirnimada aysan ku cusbeyn, balse xilka wasaradda warfaafinta markii dhawaan loo magacaabay ay ahmiyad gaar ah u lahayd, maadaama albaabkii uu ilaalin jiray haatan isaga laga ilaaliyo.
"Wasaaraddii anigoo yar aan waardiyaha ka ahaa in aan wasiir ka noqdo macno gaar ah ayay ii sameneysaa, qofkii maqlana macno ayay u sameyneysaa, maadaam xilligaas aan ahaa wiil yar oo qori albaabka la taagan" ayuu ku daray wasiir Suleymaan oo sheegay in shaqada qaran kahor loo tababaray askarinimo.
"Waxaa muhiim ah in qofka aanu is dhiibin oo uu dedaalo, in qofka bani'aadamka uu shaqeeyoo oo marxalad kasta la dabaasho, dad badan iyo aniguba waxaan u arkaa inay guul tahay in aan wasiir ka noqdo halkii aan waardiyaha ka ahaa,"
Barnaamijka shaqo qaran oo ahaa mid ay taladiisa lahayd dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa wuxuu ahaa mid dhallinyarada ama ardayda ka baxa dugsiyada sare loogu diri jiray shaqooyin lix bilood ah kahor inta aanan laga dhigin laba sano, waxaana xilligaas la dhihi jiray gurmadka mashaariicda qaranka.
Hase yeeshee heerka uu noolasha kasoo maray wasiir Suleymaan ayaa ah mid dhiiragelin leh, maadaama ay adag tahay in qof uu wasiir ka noqdo albaabkii uu ilaalin jiray.
Maxaa looga hadlay kulanka Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Denmark?
Somaliland 22.01.2020. 15:30
Madaxtooyada Somaliland ayaa sharaxaad ka bixisay qodobada looga hadlay shirka.
BF Somalia oo Qoraal Ku Saabsan Khaliijka u Direy Madaxweyne Farmaajo [AKHRI]
Soomaliya 14.07.2017. 00:36
Somalia: Booqashooyinka RW Khayre ee goobaha dadweynaha oo cabashooyin laga muujiyey
Soomaliya 08.07.2017. 11:02
Diyaarad rakaab siday oo "loo diidey" in ay ka degto madaarka Hargeysa
Somaliland 19.03.2020. 10:25
Madmadow ku jira sharci uu Farmaajo saxiixay oo lagu baaqay in la xaliyo
Soomaliya 25.02.2020. 14:40
Is-aragii Farmaajo iyo Biixi oo sii kala fogeeyay xisbiyadda Somaliland
Somaliland 14.02.2020. 12:05
Xubin ka tirsanayd gudiga wadahadalka DF iyo Somaliland oo "is-casishay"
Soomaliya 22.01.2020. 13:39
Somaliland oo u digtay Beesha Caalamka xili ay wajaheyso cadaadis
Somaliland 26.12.2019. 17:25